ချိန်းရှယ်ယာယခုအွန်လိုင်း Apple Inc. ဒီနေ့ AAPL ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်း, စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ Apple Inc. ။
AAPL = 159.22 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာဘေ့စ်များမှ Apple Inc. မှ အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှစတော့စျေးနှုန်း။ Crypto လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားလုံးကို crypto လဲလှယ်စျေးကွက်တွင်ပြုလုပ်သည်။ စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုကိုးကားသည်။ 1 စတော့ရှယ်ယာ Apple Inc. ညီမျှသည် 159.22 ၏စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ 1 စတော့ရှယ်ယာ Apple Inc. သည်စျေးသက်သာလာသည် 0.47 အမေရိကန်တဒေါ်လာ Apple Inc. နှုန်းဟာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ -29 ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်း၏ရာဂဏန်းထက်လျော့နည်းသွားသည်။
Apple Inc. ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာတန်ဖိုး အမေရိကန်တဒေါ်လာ
လွန်ခဲ့သောတစ်လက Apple Inc. ကို 179.38 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောသုံးလက Apple Inc. ကို 149.80 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက်လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လက Apple Inc. ကို 145.86 အမေရိကန်တဒေါ်လာ သို့လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များအတွက်စတော့စျေးနှုန်းဇယားပြနေသည်။ -1.96% တစ်ပတ်လျှင် - Apple Inc. ၏စတော့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ -11.24% - Apple Inc. ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကိုတစ်လလျှင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပြောင်းလဲခြင်း။
စတော့ရှယ်ယာကိုးကား Apple Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ
AAPL သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
1 AAPL 159.22 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
5 AAPL 796.10 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
10 AAPL 1 592.20 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
25 AAPL3980.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
50 AAPL7961 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
100 AAPL 15 922 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
250 AAPL 39 805 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
500 AAPL 79 610 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ဒီနေ့ 1 592.20 USD = 10 ၏စတော့ရှယ်ယာ AAPL စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းပြောင်းလဲစက်သည်ယခုပေးသည်3980.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် 25 ၏စတော့ရှယ်ယာ Apple Inc. ။ 50 Sberbank7961 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 50 စတော့ရှယ်ယာကိုပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ ယခုအဘို့အစတော့ရှယ်ယာကိုးကား converter ကို 100 ၏စတော့ရှယ်ယာ Apple Inc. ပေးသည် 15 922 အမေရိကန်တဒေါ်လာ မင်းရှိရင် 250 ၏စတော့ရှယ်ယာ Apple Inc. ပြီးလျှင်၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သင်ဝယ်နိုင်သည် 39 805 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 500 Sberbank 79 610 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 500 စတော့ရှယ်ယာကိုပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ AAPL သမိုင်း
27 ဇန္နဝါရီလ 2022 Apple Inc. ၁ ခု၏စတော့ရှယ်ယာ 159.22 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 26 ဇန္နဝါရီလ 2022 Apple Inc. = 159.69 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ Apple Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ 05/20/2019 တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ 159.78 အမေရိကန်တဒေါ်လာ AAPL / USD ရှယ်ယာဈေးနှုန်း 21/01/2022 SBRBC span> ။ ပြီးခဲ့သည့်လအတွက်အနည်းဆုံး AAPL / USD စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းသည် 27/01/2022 အပေါ်ရှိခဲ့သည်။
Apple Inc. ၏တစျခုမှာဝေစုကိုယနေ့ 159.22 $. ဝေမျှမယ်စျေးနှုန်း AAPL ယခင်ကုန်သွယ် နေ့မှစ. -0.295% သို့မဟုတ် -0.47 USD သို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ 15 922 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် Apple Inc. 100 ရှယ်ယာဝယ်ခြင်း, သို့မဟုတ်7961 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် AAPL ၏ 50 ရှယ်ယာများကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
Apple က Inc မှဖြေရှင်းနည်းများနှင့် Third-party ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာနှင့် applications များ networking ဒီဇိုင်းများ, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဈေးကှကျကမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာ devices များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ, နှင့်ဆက်စပ်ဆော့ဖျဝဲအမျိုးမျိုးရောင်းချ, ဝန်ဆောင်မှုများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။